कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आजदेखि इटहरी पाँचदिनसम्म बन्द – Dainik Sangalo
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आजदेखि इटहरी पाँचदिनसम्म बन्द
August 5, 2020 240
इटहरी, साउन २१ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । आजदेखि लागू हुने गरी उपमहानगरपालिकाले मंगलबार लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ५ दिनका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केही दिनयता इटहरी उपमहानगरपालिकाका एक इन्जिनियरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै परीक्षणको दायरालाई तीब्रता दिईइको थियो । १५ गते यता मात्रै ३ सय ५२ जनाको स्वाब संकलन गरिएको र तीमध्ये मंगलबार मात्रै ४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले जानकारी दिए ।
‘मंगलबार पनि थप एक कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ,’ मेयर चौधरीले भने, ‘२५ गतेसम्मका लागि सबै बजार क्षेत्र लकडाउन गर्ने निर्णय भएको हो ।’ इटहरीका बुद्धिजीवि, सरोकारवाला निकाय, प्रहरी प्रशासन लगायत बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । अहिलेसम्म इटहरी क्षेत्रमा इटहरी नगर क्षेत्र ५ दिनका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय भएको छ ।
आजबाट दूध र औषधीका पसलहरू बाहेक सम्पूर्ण पसल व्यावसाय, तथा कार्यालयहरु समेत बन्द हुनेगरी लकडाउन गर्ने निर्णय भएको छ । उद्योग कलकारखाना बाहेक सबै क्षेत्र बन्द हुने बताईएको छ । इटहरीमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २१ पुगेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
Prevकोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अब लकडाउनमा कडाइ, कर्फ्यु लगाउनेदेखि सिलसम्म गर्न सक्छ
Nextबल्ल बाहिरियो: बाकसमा फालेको नानीको बास्तबिकता ! पक्राउ परिन पुष्पा अधिकारी (भिडियो सहित)
अन्जु पन्तको बिबाह संगै नयाँ खुलासा अन्जुले किन गरिन त बिबाह ? दुबै जनाको दोश्रो बिबाह
Breking दुर्गा प्रसाईंलाई विप्लव समूहद्वारा का, रबाहीको तयारी (विज्ञप्ति सहित)